Dayactirka waddada dhexmarta Gaalkacyo oo wax ka beddeshay ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka - Radio Ergo
(ERGO) – Jaamac Haruuse Maxamed waa ganacsade leh bakhaar lagu iibiyo raashinka oo ku yaalla bartamaha waddada marta magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan meel caan ku ahayd biyo-fariisadka. Jaamac wuxuu ka faa`iidaystay dayactirka waddadaas oo u sahashay inuu shaqeeyo waqti dheeri ah oo aanu hore u shaqayn jirin, sida habeenkii oo uu iminka saacado badan halkaas ka shaqaysto.
Dayactirka waddooyinkan ayaa iska kaashtay dadweynaha deggan magaalada iyagoo taageero ka helaya maamulka iyo hay`ado kale. Burburkan ayaa keenay biyaha roobabka oo fariisin ka dhigtay bartamaha waddadaas, isla markaana ayan helin dayactir waqtiyada ku habboon. Waxaa si gaar ah dhib ugu qabay gaadiidlayda iyo ganacsatada, maaddaama ay adkaatay isu socodkii magaalada.
Jaamac ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in dhismaha waddada oo ahayd iskutashi bulsho, uu isaguna ku yaboohay dhankiisa lacag dhan $700. Waxa uu sharxayaa dhibaatadii uu ku qabi jiray waddadaas oo noqotay midaan la mari karin xilliyada roobabka.
“Meeshaan marka roobku da’o lama mari jirin, baabuurtu way ka go’i jirtay, bilaa layr bey ahayd, tuugadaa ku soo gabbanaysay, nabadgalyo-xumaadey qayb ka qaadanaysay, in burcadda xashiishadda in meeshaas lagula soo gabbado haddey mugdi tahay oo aan la dagganayn oo layr ku xirnayn,” waana middaas midda keentay iney dadku ka go`aan waddadaas ayuu yiri Jaamac.
Muddo ka badan shan iyo toban sano buu Jaamac daris la ahaa dhibaatadaas, iyadoo maalinba maalinta ka dambaysaa ay ka sii daraysay, waxaana aad u sii xumaanayay oo hoos u sii dhacayay ganacsigeeda iyo isu-socodkeeda.
“Haddaanu nahay dadka laamiga dhiniciisa daggan, ganacsigeennu waxaa uu ku xiran yahay waddadaan, jidka soddonku uu galo, halkaan baabuur badan baa nooga timaadda, intaas baabuurtu way istaagtaa, wax bey naga iibsaan, lacag bay naga sarriftaan, annaga lafteennu waan aadnaa xaafaddaas oo waan ka soo adeeganna,” ayuu yiri Jaamac.
Maxamed Cabdinaasir Cigaal guddoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo ee Puntland ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in mashruucan dhismaha oo markii hore si isxilqaan ah bulshada Gaalkacyo ku bilaabeen, ayaa waxaa inta badan dhistay hay’adda SSF (Somali Stability Fund). Hay`adda CPD ayaa iyaduna ku xirtay waddooyinka la dayactiray hareerahooda layrarka soolarka ku shaqeeya, taasoo iyadana sii sahashay isu socodka habeenkii ah.
“Isdhexgalka bulshada markii hore aad buu isku socodku u yaraa baabuurka tagsiga ah ee dhanka Puntalnd ka shaqeeya markii hore umuusan gudbi jirin dhanka Galmudug, kan Galmudug ka shaqeeyana dhankan uma soo gudbi jirin oo wax khad cagaaran la yiraahdo ayaa u dhaxeeyay, wixiina hadda way ka baxeen meesha, tagaasilayda hadda labada xaafad dirito ayay uga kala adeegaan,” ayuu yiri.
Dhismaha waddadan waxaa sidoo kale ka faa’iideysanaya xilligaan dadka ku shaqaysta gaadiidka bajaajta oo boqollaal dhallinyaro ah ay ka shaqaystaan.
Cali Maxamed Shire waa aabbaha qoys lix qof ka kooban, wuxuuna kamid yahay dhallinyaradaas bajaajlayda ah. Wuxuu Raadiyo Ergo uga warramay sida uu ugu faraxsan yahay dayacatirka waddadan iyo dhibaatadii uu ku qabay markii hore.
“Bajaajta ma dhexmari karto xilliyada roobabka, waxaa jirtay xilliyo aanan tagi jirinba meelaha suuqa ah, 15 bari 20 ilaa 30 bari, dhibaato dhaqaale ayaa naga soo gaari jirtay.”
Maalinkii waxa uu bajaajta ka helaa cel-celis ahaan siddeed ilaa toban doollar oo faa’iido ah, marmarkii ay dhacdo iney shaqada ka istaagto xilli roobaadkana wuxuu sheegay inuu isku dabbaro lacago u kaydsan.
Maxamed Cabdinaasir Cigaal guddoomiye ku-xigeenka waqooyiga Gaalkacyo ayaa sheegay in mashruucan wajigiisa koowaad uu gabagabo ku dhow yahay isla markaana wajiga labaad ay qorshaynayaan sannadka soo socda.
“Mahaariicdaan bulshada ayaa loogu talagalay, waxaannu ku boorrinayna sidii ay horay uga qayb-qaateen una soo dhaweeyeen mashaariicdatan si la mid ah ay ugu laba-jibbaaraan, iyagoo hindisaya afkaar ah wajhadahooda iyo laamiga inta u dhaxaysa ay bilicdeeda wanajajiyaan, annaguna aan kala qayb-qaadan doonno oo diyaar aan u nahay,” ayuu yiri guddoomiye ku-xigeenka.